ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၄-၅-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြောတာ မကျေနပ်လို့ ဆန္ဒထပ်ပြ click
- အခကြေးယူ ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့ သမ္မတပြောဆိုချက်အပေါ် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြ click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို သက်သေပြဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို click
- အရေးပေါ်ဥပဒေနဲ့ တရားစီရင်ရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝေဖန် (ရုပ်သံ) click
- သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အမေရိကန်ခရီးစဉ် (ရုပ်သံ) click
- “၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာ ရှိသင့်ရှိထိုက်တယ်” ဆိုပါလား (ဆောင်းပါး) click
- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်ဝတ်နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ (ဆောင်းပါး) click
- လစာ၊ အခွင့်ရေးရဖို့ လှိုင်သာယာ စက်ရုံ ၅ ရုံမှာ ဆန္ဒပြ click
- ဒေသခံတွေ တိုင်ကြားမှုကြောင့် ကုမ္ပဏီက ရွှေ ၂ တန် ပြန်ပေးဖို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆုံးဖြတ် click
- နာဂဒေသတချို့မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဆန်ပြတ်လတ်နေ click
- ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်း စာသင်ကျောင်းတွေမှာ အရေးတကြီး အကူအညီ လိုနေ click
- KIO နဲ့ အစိုးရ ဆွေးနွေးပွဲ မြစ်ကြီးနားတွင် ပြုလုပ်မည် click
- မြန်မာသံရုံး တိုက်ခိုက်ဖို့ သံသယရှိသူ နောက်ထပ် ၂ ဦး အင်ဒိုရဲ ဖမ်းဆီး click
- မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲဖို့ ကြံသူ အင်ဒိုနီးရှား ၂ ဦးကို ဖမ်းမိ click
- ၈ လေးလုံး ငွေရတုအတွက် ၈၈ မျိုးဆက်၊ ABSDF နဲ့ လူ့ဘောင်သစ်ပါတီတို့ နှိုးဆော် click
- ပအိုဝ်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ညီလာခံ ကျင်းပ click
- မြန်မာ့အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် (ရုပ်သံ) click
- အင်တာနက် လွတ်လပ်ခွင့် AI တောင်းဆို (ရုပ်သံ) click
- တာဝန်ခံတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အစီရင်ခံလွှာ တင်ပြဖို့ အမေရိကန်အစိုးရ ကြေညာ click
- မြန်မာရှိ အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အစီရင်ခံစာများတင်ဖို့ ရက်သတ်မှတ် click
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ မနက်ဖြန် စမယ့် မြန်မာခရီးစဉ် click
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာခရီး စတင်ပြီ click
- ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည် လာမည် click
- ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် (လွတ်လပ်အတွေး ဆွေးနွေးဖလှယ်) click
- မြိတ်မြို့နယ်မှာ တည်ဆောက်မယ့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်း click
- လောပိတရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ နယ်မြေခံရွာများ (ရုပ်သံ) click
- သီလ၀ါစီမံကိန်း လျော်ကြေးကိစ္စ အစိုးရ ဆောင်ရွက် click
- မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သန်းခွဲ ဘန်ကောက်မှာ ဖမ်းမိ click
- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေး နှိုးဆော်သူများ အစည်းအဝေး ကျင်းပ click
- ပထမဆုံးအကြိမ် အကျဉ်းကျ မိသားစုများ၏ ပညာရေးစရိတ် ကူညီပံ့ပုိုးပွဲ click
- ကျားရဲ (ကဗျာ) click
- လွန်ဆွဲပွဲများ (ကဗျာ) click
- ဒီထက်တော့ မလျှော့နိုင်တော့ဘူး ဟေ့ကောင်ရေ … (ကာတွန်း) click
- ဟုိုဘ၀တုန်းက သိမ်းခဲ့တာ ... (ကာတွန်း) click
- သမ္မတ အိုဘားမား စစ်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြော click
- မောင်းသူမဲ့ယာဉ်နဲ့ တိုက်ခိုက်တာ ထိရောက် တရားနည်းလမ်းကျတယ်လို့ ဆို click
- အမေရိကန်ရောက် အာရှနွယ်ဖွား လူငယ်များ (ရုပ်သံ) click
- Woolwich လူသတ်မှုအပေါ် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှုတ်ချ click
- နီဂျဲမှာ စစ်တန်းလျားနဲ့ မြောက်ပိုင်းက ယူရေနီယံမိုင်း တိုက်ခိုက်ခံရ click
- ဂျပန်-ထိုင်း လုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့် click
- ၈၀ ကျော် ဂျပန်ဖိုးဖိုး ဧ၀ရက်တောင် တက်ရောက် click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 1:15 PM
မြန်မာနိုင်ငံရဲ. အင်တာနက်မြန်နှုန်း ကိုအစိုးရက ဘာ.ကြောင်.ထိန်းချုပ် ရတာဘာလဲ ၊ ယခင်ကလို ကလိမ်ကကျစ် အတွေးအခေါ်တွေ ဆက်ရှိနေတုန်းပါ ၊
... ခုဟာက မနက် ၄နာရီ သုံးလည်း ထိန်းချုပ်ထားလို.
နေ.ခင်းဘက် အတိုင်း နှေးလျက်ဘဲ ၊
.. သာမန် ပြည်သူတွေ တတ်နိုင်တဲ.နှုန်းထားနဲ. အင်တာနက် သုံးစွဲနိုင်ရေးလည်း စတင်ဆောင်ရွက်သင်.ပါပြီ ၊
... ခရိုနီတွေ အကျိုး ... အတွက် ငဲ.နေလို.များလား ?
ဒေါ်စု ကလည်း ၂၀၁၅ ကိစ္စ လောက် စိတ်ဝင်စားပုံ မရ။
အင်တာနက်မြန်နှုန်း က ထိန်းချုပ်ထားတာ မရှိရင် လူတွေအသုံးများ ချိန်မှာ နှေးပြီး အသုံးနည်းချိန်
မြန်ရမှာ တော.အမှန်ပါ ။
chit min ko said...
ဘာပဲပြောပြောလက် ရှိနှုန်းထက်တော့ မြန်လာမယ်လို့ ထင် ပါတယ် ။ ထိန်းချုပ်မှု့တွေမရှိရင် ပေါ့ ။ လွတ်လပ်မှု့ရဲ့ အရသာကို မြန်မာနိုင် ငံသားအားလုံး ခံစားခွင့်ရရင် ပိုကောင်းမယ်ထင် ပါတယ် ။